Shaqaale Hindi ah iyo doontii ay la socdeen oo maanta ka Shiraacatay xeebta Degmada Hobyo | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Shaqaale Hindi ah iyo doontii ay la socdeen oo maanta ka Shiraacatay...
Shaqaale Hindi ah iyo doontii ay la socdeen oo maanta ka Shiraacatay xeebta Degmada Hobyo
Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay sagootiyeen 10 Badmaax oo u dhalatay Wadanka Hindiya kadib kolkii Ciidamada Galmudug ay ka soo furteen kooxo hhubeysan oo heystay muddo ka badan toban cish ah.
Shaqaalahaasi ajnabiga ah ayaa maanta dib u bilaanay safar dhinaca badda ah, iyagoo doon ganacsi oo ay horay u badbaadiyeen ciidamada Glmudug ka watay xeebta Hobyo, waxaana doonta iyo shaqaalaha oo badqaba ay u shareecdeen dhanka magaalada Kismaayo oo kolkii hore ay u rarneyd doonta ganacsi.
Guddoomiyaha Degmada Hobyo ee Maamulka Galmudug C/llaahi Faat ayaa sheegay in aysan u dulqaadan doonin in deegaanadooda ay ka dhacaan falal burcadbadeednimo ah, wuxuuna u mahadceliyay ciidamadii gacanta ka geystay sii deynta shaqaalahaasi Ajanabiga ah.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in shaqaalaha ay gaarayaan toban, kuwaasi oo labo ka mid ay kolhore soo badbaadiyeen halka sideedda kale ay dhawaan ka soo badbaadiyeen burcaddii heystay.
Previous articleMaamulka Degmada Heliwaa oo markale Olole Nadaafadeed ka bilaabay mid ka mid ah waaxyaha degmada
Next articleShirka Golaha Wasiirada oo looga hadlay Qorshaha Amniga Qaranka, Abaaraha iyo dardargelinta howlaha dowladda